သွေးဆုံးကိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဆေးခြောက်ရှုရင် သက်သာတယ်လို့ ဆို လို့ အငြင်းအခုံတွေဖြစ် မောင်ယဿ ( စက်တင်ဘာ ၂၃ ) သွေးဆုံးသွားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ စိတ်ဂဏါမငြိမ်ဖြစ်တာတွေ ၊ မိန်းမကိုယ်ခြောက်တာတွေ ၊ အသားပူတာတွေ ၊ ချမ်းတတ်တာတွေ ၊ ညဖက်မှာ ချွေးပျံတာတွေ ၊ အိပ်မပျော်တာတွေ ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲဖြစ်တာတွေ ၊ ကိုယ့်အလေးချိန်တက်တာတွေနဲ့ အစာချေစနစ်နှေးတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ကိုက်ခဲ နာကျင်နေတတ်တာပါ။ လေ့လာမှု အသစ်တစ်ရပ်က ဆေးခြောက် အနည်းငယ်ရှုလိုက်ရင် အဲ့ဒိရောဂါလက္ခဏါတွေသက်သာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကနေဒါ အယ်လ်ဘာတာတက္ကသိုလ်က ဘွဲယူစာတမ်းတင်တဲ့ ကတ်သရင်းဘတ်ရင်က သူမရဲ့ သုတေသနစာတမ်းထဲမှာ အဲ့ဒိအကြောင်း ကို …
အစားလျှော့စားစရာမလိုပဲ သင့်ကို ကျန်းမာစေမယ့် အချက် (၁၀) ချက်
အစားလျှော့စားစရာမလိုပဲ သင့်ကို ကျန်းမာစေမယ့် အချက် (၁၀) ချက် အချိန်တိုအတွင်း အစားလျှော့စားခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန်လည်း မကျစေသလို လူအများစုနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ မကိုက်ညီဘူးလို့ American Psychologist ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျန်းမာတဲ့သူတွေက အစားလျှော့စားရင် အဆင်မပြေကြပါဘူး။ 1. ဖြည်းဖြည်းစားပြီး သေချာဝါးပါ။ အစားကို မြန်မြန်စားတဲ့သူက နှေးနှေးစားတဲ့သူထက် အလေးချိန် မြန်မြန်တက် နိုင်ပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သေချာဝါးစားရင် နည်းနည်းစားတာတောင် ဗိုက်ပြည့်သလို ခံစားရမှာပါ။ ဖြည်းဖြည်းစားတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရဖို့ တစ်လုတ်ကို ဘယ်နှကြိမ်ဝါးလဲဆိုတာ ရေတွက်ထားပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝါးတဲ့အကြိမ်အရေအတွက် များလာပါလိမ့်မယ်။ 2. ရေမှန်မှန် သောက်ပါ။ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက် ရေက မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ …
မလိုက်ဖက်ဘူးလို့ ထင်တဲ့အတွဲတွေက ပိုမိုခိုင်မြဲရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
မလိုက်ဖက်ဘူးလို့ ထင်တဲ့အတွဲတွေက ပိုမိုခိုင်မြဲရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အမြင်မှာ မလိုက်ဖက်ဘူး လို့ ထင်ရတဲ့ အတွဲတွေက အချစ်ရေးမှာ ပိုသာယာလေ့ ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်က အသားဖြူ တစ်ယောက်က သပိတ်နုရောင် ဖြစ်နေရင် သေချာတယ် ၊ သိပ်အကဲပိုတဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ် ။ ကောင်လေးက ဝါးခြမ်းပြား ကောင်မလေးက ကောက်ညှင်းထုပ်လေး ဖြစ်နေရင် အဲ့အတွဲ ဒီတစ်သက် သေတောင် မပြတ်နိုင်ဘူး ။ ယောက်ျားလေး အရပ်မြင့်မြင့် မိန်းခလေးက မြေကြီးထဲ ကျွံဝင်တဲ့ အရပ်မျိုး ဖြစ်နေရင် အဲ့ဒါမှ Romantic ဆန်တဲ့ စုံတွဲလို့ ခေါ်တာ ။ ဘဲကြီး ရုပ်က ဂါနေမယ် …
ကလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေရဲ့ အပြုအမူ (၉) ခု
ကလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေရဲ့ အပြုအမူ (၉) ခု ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေမှာ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းနဲ့ စိုးရိမ်သောကတွေ များတဲ့အခါ ကလေးကို လမစေ့ဘဲမွေးတာ၊ ပေါင်မပြည့်ဘဲမွေးတာ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ လေ့လာမှုတွေက ဆိုပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ သတိမထားမိလိုက်တဲ့ အပြုအမူတချို့ကလည်း ကလေးကို ထိခိုက်စေ ပါသေးတယ်။ ၁။ ရန်ဖြစ်ခြင်း၊ အော်ခြင်း ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ ပူပင်သောကရောက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေလို့ ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရန်ဖြစ်လို့အော်တဲ့အခါ မိခင်မှာပါ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်းတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် များများအနားယူခြင်း၊ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ပြီး လေကောင်းလေသန့်ရှူခြင်းတို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၂။ သကြားစားသုံးမှု များခြင်း …
ကောလဟာလ တခါတုန်းက အဖိုးအို တဦးသည် သူ၏ အိမ်နီးနားချင်း လူငယ်လေး တဦးအား သူခိုးတယောက် ဆိုပီး ကောလဟာလများ လိုက်၍ ပြောဆိုလေသည် ။ ထိုသို့ သွားပုပ်လေလွင့် ပြောဆိုမှုကြောင့် ကောင်လေးမှာ များမကြာခင် အဖမ်းခံရလေ တော့သည် ။ သို့သော် ရက်အနည်းငယ် အကြာတွင် ကောင်လေးမှာ အပြစ်တစုံတရာ မရှိသောကြောင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်ခဲ့လေသည် ။ ကောင်လေးသည် အိမ်အပြန် လမ်းတလျှောက် မိမိအား မဟုတ်တမ်းတရား စွပ်စွဲခံရသည်ကို လွန်စွာ ရှက်မိသည့် အလျောက် အဖိုးအိုအား အသရေဖြတ်မှုဖြင့် တရားရုံးတွင် တရားပြန်စွဲလေ တော့သည် ။ တရားရုံးထဲတွင် အဖိုးအိုမှ တရားသူကြီးအား ပြောသည်မှာ.. …